केही आफ्नै कथा, ब्यथा अनि भावनाहरु: नेपालको वर्तमान अवस्था
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 3:14 AM
नेपालको बर्तमान अवस्था, शिर्षकको तपाईंको लेख असाध्यै मिल्दो-जुल्दो छ । यथार्थ चिन्तन छ त्यहाँ लेख भित्र । तर जती पनि त्यो अड्डा अदालत, ओकिल र सर्बोच्च अनी रजानैतिक पार्टीहरुको कुरो गर्नु भा'छ । त्यो यथावत रहिरहन्छ । दु:खको कुरो यहाँ छ । तपाईंकै भनाइमा- "अहिले गठित नया सरकारले यो दण्डहिनताको अन्त्य गरिनु पर्छ र म जस्ता सर्वसाधारणले पनि चैन र आरामको जीवन ब्यतित गर्न पाउनु पर्छ ।" लेख्नु भा'छ । उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन । बर्तमान सरकारले केहीनै गर्न सक्दैन । जो-जो ब्यक्तिलाई नेपाल र नेपाली नागरिकले नै स्वीकार गरेका छैन, उही देशको प्रधानमन्त्री, उही नै देशको रक्षा अनी गृह जस्ता प्रमुख नाईके भई देश नाशक तत्व बनेका छन । भारतीय राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले सोझै लेख्यो, फुक्यो, भन्यो- "भारतिय मुलको ब्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्री भयो'रे !" ल हेर्नुस्- कहाँ सम्मको ठाडो नेपालप्रतिको देख्ने नजर वा हस्तक्षेप । अर्को कुरो, कुनै पनि सरकारले केही गर्नु पर्छ र यदी गर्छ भने लगातार डेढ दशक, २ दशक सरकारमा रहेर राज्य सञ्चालन गर्नु पर्छ । अन्य राजनैतिक दलहरुले उसको साकारात्मक कार्यमा सहर्ष स्वीकार गर्न सक्नु पर्छ । नाम मात्रको कम्युनिष्ट हुँ भनेर काम चल्दैन । कडा भन्दा कडा र स्वच्छ क्रान्तिकारी बिचारधारा नै भएको कम्युनिष्टको खाँचो छ । युरोपियन राष्ट्रहरुबाट "मानबअधिकार" को कुरो आयो । त्यहाँ छैन मानब अधिकारको कुरो । भने हाम्रो देशमा आउछ कुरो मानब अधिकारको । भन्नाले मार्नु र मर्नु नै क्रान्तिकारी बन्नु हैन । तर कुनै पनि त्यस्ता जघन्य अपराधका भागेदारहरुलाई मृत्युदण्ड सम्मको सजाय भोग्न वाध्य बनाइनु पर्छ र भोग्नु पनि पर्छ । ताकी त्यस्तो कार्य अरुबाट हुन छाडोस । बोरामा एउटा आलु कुहिनुले सबैलाई नष्ट गरिदिन्छ भने त्यो एउटालाई जिकेर फ्याक्दा सबै आलु सफा हुन्छ । अर्को प्रसंगमा, जुन चेली-बेटीको र भारतीय खुला सिमानाको कुरो छ- जसमा हालै घटेको वा घट्दै गरेको दाङको घटनामा त्यहाँ त्यती सम्म भयो । कि बर्णन गर्दा पनि दु:खको कुरो छ । त्यो अब हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री सुजता दिदीले ठाडै भनी दिनुहुन्छ- यो घटना घटेको छैन, त्यसो भएको छैन, अर्थात वनवटी कुरो । वहाँ एउटा महलको युवराज्ञी भएर हुर्केकी मान्छे ले चेली-बेटीको समस्या र सिमा देखेकी छिन ? बुझेकी छिन् होला त्यो करो ? हुन त कमेन्ट भनेर लेख्दै जाँदा लामै भई गएछ माफ गर्नुहोला । के गर्ने मलाई पनि लागेको कुरो गरी हालौ झै लाग्छ । तैपनी मलाई के लाग्छ भने, देशबासी हामी जो कोहिले पनि सुखको श्वास फेर्नु छ भने दुनियाँ यो लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा खुकुलो नीति-नियम, ऐन, बिधान नभएर कडा भन्दा कडा संबिधान भन्नु पर्छ । जुनकुनै पनि राजनैतीक पार्टीले राज्य सञ्चालन गरेपनी दिर्घकालिन शान्तिका साथ आफ्नो ढंगबाट जनताको हितमा रहेर, भारतका पण्डितहरुको आशिर्बाद लिएर हैन । हैन भने ठूला-ठूलाका जती माइत र ससुराली भारत नै छ, नेपाललाई भारतको कुनै अंग भनाइदिन्छन । यसबाट होसियार रहौ, नेपाली मन मुटुहरु !!